I-FEELM Tech - SMOORE International Holdings Limited
Itekhnoloji yoBushushu boBuchule kwiPod elandelayo
Ifakwe kwisisombululo esiphuculweyo somdumba, imveliso yomphunga inyuka ngokwahlukileyo. Izigidi zeepoyile ezincinci kwi-ceramic coil zivelisa umphunga ococekileyo kunye nococekileyo, ohambisa ukunambitheka okukhulu kunye namava okhethekileyo.
Ibhalansi yeDynamic yeTekhnoloji evuzayo
Idityaniswe kuthotho lwezisombululo ezivuzayo, iDynamic Balance Leak-proof Technology iyakwazi ukuthoba izinga lokuvuza ukuya kuthi ga kwi-98%, xa kuthelekiswa neepods eziqhelekileyo.
I-Bowl emile nge-FEELM Coil, i-Anti-Condensation Structure, i-U-shaped Air Passage, iiNdawo eziMoya ezintathu kunye nolwakhiwo lweMaze ziyinxalenye yezisombululo. Ibhalansi yeDynamic Itekhnoloji yokuvuza evuzayo yamkela izisombululo ezahlukeneyo ngokweendidi ezahlukeneyo, ejolise ekwehliseni izinga lokuvuza ukuya kwelona likhulu landisiwe.
Ithontsi ngalinye le-E-liquid liyaphefumlwa laya kumasuntswana e-aerosol amancinci kune-1μm, ephucula kakhulu ukusebenza konikezelo lwe-nicotine.
Amasuntswana eAerosol amancinci kune-1μm, nkqu nomphunga ogudileyo uzisa incasa emsulwa nebukhali
Amasuntswana eerosol amakhulu, umphunga onamandla kodwa ongalinganiyo ubangela incasa encangathi
Amava angqinelanayo aphuma kumava ade akhuphe ukukhukhumala kokugqibela
Ukungaguquguquki okubuthathaka, amava aphefumlayo aya ephela ngokuthe ngcembe
Ulwaneliseko olukhulu, ukuhanjiswa kwe-nicotine kunyusa i-87.58%
Ukuhanjiswa okungafunekiyo kwe-nicotine kukhokelela kulwaneliseko olusezantsi
Ubushushu obungcono ngokufanayo, akukho incasa itshiswayo
Ubushushu obungalinganiyo bubangela ukubetha okomileyo rhoqo
Ikhoyili ye-ceramic coil kunye nokuqina komoya okungcono kunciphisa kakhulu izinga lokuvuza
Ulwakhiwo olungalunganga alunokutshixa ulwelo ngokuqinileyo, inqanaba lokuvuza okuphezulu
Akukho kwahlukana, kuthule kakhulu
Ukukhwaza kunye nokuqhekeka kwengxolo, umngcipheko omkhulu
Imveliso ezenzekelayo kunye neenqobo zovavanyo zamazwe aphesheya ziqinisekisa umgangatho ophezulu
Imveliso yesandla yemveli ikhokelela kumgangatho ongazinzanga
“Kukumgangatho ophezulu wokwakha, ukulingisa ngokuchanekileyo kwesigarethi ukuza kuthi ga ngoku kunye nokuzoba okuthe tye. U-FEELM ngokucacileyo uneqonga eliqinileyo apha kwaye ndijonge phambili ekusetyenzisweni kwetekhnoloji kwixa elizayo. ”
“Ikhoyili yeFEELM iqhuba kakuhle. Isongo sicocekile ngokwenene, shushu kamnandi, kwaye umqala ubetha uqinile. Kwakungekho kuvuza, ukutshica, okanye ukuphuma nantoni na! Ikwayivape ephezulu ethe cwaka. ”
“I-FEELM Pod ibonelela ngokugqitywa okucocekileyo, umgangatho obalaseleyo, i-vape efanelekileyo esebenzayo kwifomathi ehambelana. Alithandabuzeki elokuba lolona khetho lubalaseleyo lokuqalisa umdiza we-elektroniki. ”
"Ezo coil zinqumlayo ngokucacileyo ngoyena uqhuba i-vape ecolekileyo nenencasa, i-vape ngeli xa ipholileyo ifudumele, isagudile kakhulu kwaye iyonwabisa kakhulu."
IINKCUKACHA ZE-CoIL: I-atomizer entsha ye-FEELM evela kwi-SMOORE isebenzisa itekhnoloji yefilimu yokufudumeza isinyithi ukuphucula amava e-pod-style vaping.
Isigarethi soLwelo esiTywala, Newport E umdiza, Epen, Iicigarete zobushushu, Ukutshaya enye indlela, Ipakethe yeBlister ye-cigarette,